Juan Francisco Ferrándiz. Ajụjụ ọnụ ya na onye dere akwụkwọ ikpe mmiri | Akwụkwọ ugbu a
Foto: Juan Francisco Ferrándiz, profaịlụ Twitter.
Juan Francisco Ferrandiz Ọ bụ onye dere akwụkwọ akụkọ mere eme nke nwere aha dịka Oge gbara ọchịchịrị, ire ọkụ nke amamihe ma ọ bụ Ala a bụrụ ọnụ. Na March nke afọ a, ọ wepụtara nke ikpeazụ, Ikpe mmiri. Enwere m ekele maka oge na obiọma iji nye m nke a Ajụjụ ọnụ, ebe ọ na -ekwu maka ya na ọtụtụ isiokwu ndị ọzọ.
Juan Francisco Ferrándiz. Ajụjụ ọnụ
AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ: Akpọrọ akwụkwọ akụkọ ọhụrụ gị aha Ikpe mmiri. Kedu ihe ị na -agwa anyị gbasara ya ebee ka echiche si malite?
JUAN FRANCISCO FERANDIZ: El ikpe mmiri akaụntụ ndụ onye ọrụ ugbo narị afọ nke XNUMX nke anyị ga -eji mara akụkụ a na -ebipụtabeghị mana nke bụ isi nke akụkọ ntolite anyị. N'etiti ihe nkiri na ihe nzuzo anyị ga -abịaru nso nchọpụta dị ịtụnanya: ikpe ziri ezi ọhụrụ maka ndị na -adịghị ike na ndị ẹmbrayo nke ikike mmadụ. Ọ bụ ntakịrị ihe ama ama mere eme nke mere ka ụwa gbanwee.
Ọ bụ ezie na a mụọla eziokwu ndị a n'ọkwa iwu, ọ bụ na -agụ otu akụkọ banyere ihe ndị ruuru mmadụ mgbe m chere na ọ nwere ike. Otu a ka o siri malite.
JFF: Echetere m akwụkwọ akụkọ mbụ m nke ọma, ọ bụ Sandokannke Emilio dere Salgari. M ka bụ nwata, enwetara m akwụkwọ ahụ n'ọbá akwụkwọ ọchịchị obodo m, Cocentaina. Akụkọ ihe mere eme mee ka m risịrị (Ọ bụ mbibi mbụ nye onye na -agụ ya), mana mgbe ọ ruru mpịakọta nke atọ, ọ pụtara na ọ nọ na mbinye ego. Ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ kwa ụbọchị ka m na -aga elele ma ha alọghachitela ya mana mba. Otu ụbọchị, onye na -agụ akwụkwọ, ebe ọ hụrụ ndakpọ olileanya m, tụrụ aro ka m gụọ akwụkwọ ọzọ ka m na -eche. Mgbe ahụ ọ tụrụ aro ọzọ na ọzọ ... Kemgbe ahụ akwụsịbeghị m ịgụ ihe n'agbanyeghị na m na -eche ka eweghachi akụkụ nke atọ nke Sandokán.
JFF: A na -ajụkarị m ajụjụ a ọ na -esiri m ike ịza. N'ezie Enweghị m onye isi edemedeỌ dị mma, ihe na -atọ m ụtọ bụ akụkọ anyị nwere ike ịmepụta. Oke nke echiche anyị.
Site Tolkien to Reverte, Pardo Bazán, Vázquez Figueroa, Asimov, Dumas, Umberto Eco, Conrad, Ursula K. Le Guin... Dịka ị pụrụ ịhụ na ọ bụ a nchikota nke oge na ụdịỌ dị mma, ọ bụ otu a ka ọ masịrị m inyocha akwụkwọ ọgụgụ, na -enweghị aha, na -aga ụdị na ndị edemede dị iche iche.
JFF: N'ezie ọ ga -eme William nke Baskerville de Aha nke rose. Ọ na -anọchite anya onye ọ bụla ọzọ archetype nke onye ndụmọdụ; nwoke maara ihe nke na -eduzi ma na -eduzi (ọ bụghị naanị mkpụrụedemede ndị ọzọ, kamakwa onye na -agụ ya). Ọ bụ ụdị agwa na -amasị m nke ukwuu n'ihi ike ịba ọgaranya akụkọ.
JFF: Ebe ọ bụ na m mere usoro ịde ihe mgbe m bụ nwata Ọ masịrị m iji kọmputa ede ihe karịa ide ihe n'akaỌ bụ ya mere m ji eji kọmputa ede ihe mgbe niile. Ikekwe naanị mania bụ na mgbe m na -ede akwụkwọ akụkọ, ọ masịrị m ederede dị na enyo yiri ederede edepụtara, ya bụ, na ntinye ya, akụkụ ya, ogologo ogologo mkparịta ụka, font, oghere, wdg.
JFF: Abụ m ikwiikwii ma ọ bụrụ na m nwere ike ọ masịrị m ide n'abalị. Enwere m akụkụ m n'otu okpuru ulo site n'ụlọ ma na -ejigide ma omume ma ebe ọrụ. Mana site na ahụmịhe m, aga m agwa gị na ọ bụrụ na mmụọ nsọ nwere ike dee na ebe ndọba obi gbara ọchịchịrị na ịnọdụ n'oche plastik. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ọ nweghị otu ma ọ bụ na -egbochi gị, ị nwere ike ịnọworị na nnukwu akwụ ugo n'ugwu Switzerland; ọ dịghị akwụkwọ ozi na -apụta.
JFF: Ebe ọ bụ na ihe masịrị m bụ akụkọ, ọ masịrị m na ha na -eme n'ime oge dị iche iche na n'ụzọ dị iche iche (ọ ga -abụ na nnukwu ụlọ mgbe ochie, na Madrid taa ma ọ bụ na mbara igwe). Injin nke ndụ m bụ ịmata ihe ma ọ bụrụ na onye edemede nwere ike ịkpọte ya n'ime m, njem, ebe ọ bụla ọ ga -adị, ga -atọ ụtọ.
Ọzọkwa, dị ka onye ọ bụla na -ede akwụkwọ, ị ga -ekewa oge ọgụgụ ka ị depụta onwe gị, na edemede, edemede, wdg. Mgbe ụfọdụ ọ na -aghọ ọrụ nchọpụta na -atọ ụtọ.
JFF: Emechaala m akwụkwọ akụkọ akụkọ sayensị Ihe nchọta, na CarterDamon m wee were oke ịnụ ọkụ malite Akwụkwọ ahịa de louis kpochie. Dịka ị siri hụ, mgbanwe okike na -agbụ agbụ. M nwekwara a -akpali nnọọ mmasị nwalee gbasara nka ochie akpọrọ Enchanted oyiyi site na Alejandro García Avilés, ezigbo nchọpụta iji ghọta otu ihe gbasara m: na -egosipụta uche iji nwee ike ịghọta ụwa dịka mmadụ oge gboo ga -eme.
Banyere akụkọ ndị na -agbawa n'isi m, igwe ojii asabeghị na Enweghị m ike ịtụ anya ihe ọ bụla nke akwụkwọ akụkọ m ọzọ. Enwere m olileanya na m nwere ike ịgwa gị n'oge adịghị anya.
JFF: Obi abụọ adịghị ya na anyị juru eju usoro mgbanwe na ngbanwe ihe atụ. Na mgbakwunye na akwụkwọ dijitalụ, ụdị ntụrụndụ ndị ọzọ abịarutela nke nwere otu niche dị ka ịgụ ihe, m na -ekwu maka netwọkụ mmekọrịta na nyiwe nkwanye ugwu.
Mmeghachi omume nke ndị bipụtara ya bụ ịbawanye akwụkwọ ọgụgụ na kwa ọnwa, a na -apụta ọtụtụ narị mwepụta ọhụrụ, ọtụtụ obere mgbasa iji zere mfu. Nke ahụ pụtara ọtụtụ ndị ode akwụkwọ nwere ohere ibipụta, mana njem akwụkwọ ahụ pere mpe, nanị izu ole na ole ma ọ bụ ọnwa ole na ole, ihe na -esikarịkwa na ya apụta bụ ogbenye.
N'aka nke ọzọ, ụzọ a ga -esi agakwuru onye na -agụ ya abụghịzi akwụkwọ egosipụtara n'ụlọ ahịa akwụkwọ kama ọ bụ ikpughe onye ode akwụkwọ na netwọkụ. Echere m na ihe ịga nke ọma lekwasịrị anya na ndị ode akwụkwọ nwere ọnụnọ mgbasa ozi kacha ukwuu.
Ihe a niile adịghị mma ma ọ bụ ka njọ, ọ bụ mgbanwe. Akụkọ ihe mere eme juputara na mgbanwe, na obere ma ọ bụ buru ibu, nke na -anọchite anya nsogbu maka ụfọdụ yana ohere maka ndị ọzọ.
JFF: Dịka onye ọ bụla ọzọ, enwere m mmetụta nke mmetụta nke eziokwu na -apụ apụ na onye ọzọ na -etinye onwe ya. Echetara m na na mbido ọ gwara m "nke ahụ agaghị eme" ma ọ bụ "anyị agaghị erute ebe ahụ", mgbe ahụ ọ ga -eme. Mkpọchi, okporo ụzọ tọgbọ chakoo, ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ… Mgbe ị na -eche maka ya, ọ dị ike.
M na -akọwa ihe mere dị ka akụkọ ihe mere eme dịrị ndụ na onye mbụ, mana ekwetara m na enwere m nkụda mmụọ. Amaghị m ma ọ bụrụ na anyị ga-eji ohere ịkpọte ụwa a ka ọ gbanwee. Taa, ọ bụ ihe ejiji iji were oke ọnụ ahịa anyị na oke nganga na -ekpe ikpe gara aga. Ana m atụgharị uche, Kedu ka ha ga -esi kpee anyị ikpe n'ọdịnihu?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » Juan Francisco Ferrándiz. Ajụjụ ọnụ gị na onye edemede nke Nnwale Mmiri
Zute ihe nrite Nobel na 2021 na edemede